Edwuma Wɔ N’aber, Na Ahomgye So Wɔ N’aber | Ɔweɔn-Aban Adzesua
KENKAN WƆ Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Amis Angola Mmum Kasa Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Aukan Australia Mmum Kasa Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bolivia Mmum Kasa Boulou Brazil Mmum Kasa Britain Mmum Kasa Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chile Mmum Kasa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Mmum Kasa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Colombia Mmum Kasa Congo Mmum Kasa Costa Rica Mmum Kasa Croatia Mmum Kasa Croatian Cuba Mmum Kasa Czech Czech Mmum Kasa Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuador Mmum Kasa Edo Efik El Salvador Mmum Kasa English (Borɔfo) Esan Estonian Ewe (Awona) Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon French French Mmum Kasa Ga (Nkran Kasa) Garifuna Georgian German German Mmum Kasa Gitonga Gokana Greek Greek Mmum Kasa Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guatemala Mmum Kasa Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Mmum Kasa Hungarian Hungary Mmum Kasa Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko India Mmum Kasa Indonesia Mmum Kasa Indonesian Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japan Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kenya Mmum Kasa Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korea Mmum Kasa Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malawi Mmum Kasa Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexico Mmum Kasa Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Mozambique Mmum Kasa Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicaragua Mmum Kasa Nigeria Mmum Kasa Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Panama Mmum Kasa Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguay Mmum Kasa Persian Peru Mmum Kasa Philippines Mmum Kasa Pidgin (West Africa) Poland Mmum Kasa Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Mmum Kasa Punjabi Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russia Mmum Kasa Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovakia Mmum Kasa Slovenian Solomon Islands Pidgin South Africa Mmum Kasa Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Taiwan Mmum Kasa Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thailand Mmum Kasa Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuela Mmum Kasa Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba (Alata) Zambia Mmum Kasa Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Mmum Kasa Zulu
ADZESUA ASƐM 49
“Hom mbra sar do nkyɛn beebi, na hom mbɔhom kakra.”​—MARK 6:31.
NDWOM 143 Kɔ Do Yɛ Edwuma No, Weɔn Na Tweɔn
1. Nyimpa pii yɛ hɔn adze dɛn wɔ edwuma ho?
BEEBI a etse no, ebɛn adwen na nyimpa dodow no ara wɔ wɔ edwuma ho? Sɛ ekɔ aman pii do a, ibohu dɛ edwumadzen a nkorɔfo yɛ nye mber dodow a wɔdze yɛ edwuma ndɛ no, ibi nnsii da. Nyimpa a wɔyɛ edwuma tra do no, mpɛn pii no wonnya adagyer a wɔdze bɛgye hɔn ahom, wɔdze bɔhwɛ hɔn mbusua, anaa wɔdze bosũa Nyankopɔn ho adze. (Ɔsɛnk. 2:23) Nyimpa afofor so dze, wɔmmpɛ dɛ wɔbɛyɛ edwuma koraa. Ntsi, da biara wɔdze nsɛm yiyi hɔnho ano wɔ edwuma a wɔbɛyɛ ho.​—Mbɛ. 26:13, 14.
2-3. Ebɛn nhwɛdo pa na Jehovah na Jesus ayɛ wɔ edwuma ho?
2 Nyimpa a wɔwɔ wiadze yi mu no, binom yɛ edwuma tra do, na binom so nnyer hɔnho nnyɛ edwuma. Naaso, hwɛ mbrɛ Jehovah na Jesus si bu edwuma fa. Yenyim dɛ Jehovah yɛ obi a ɔpɛ edwuma. Jesus daa dɛm nokwasɛm yi edzi ber a ɔkãa dɛ: “M’Egya yɛ edwuma bodu sesei na mo so meyɛ edwuma.” (John 5:17) Hwɛ edwuma ara nko a Nyankopɔn yɛe ber a ɔbɔɔ amansan yi na abɔfo pii a yenntum mmbu hɔn ano no. Afei so, yehu ndzɛmba pii a ɔyɛ fɛw a Nyankopɔn abɔ wɔ asaase yi do. Ɔfata paara dɛ ɔdwontofo no kãa asɛm a odzi do yi: ‘Jehovah, mbrɛ wo ndwuma dua dɔɔ sõ a! Nyansa mu na ayɛ hɔn nyinara: asaase ahyɛ w’abɔdze mã.’​—Ndw. 104:24.
3 Jesus sũasuaa n’Egya. Ɔboaa Nyankopɔn ber a nna “orisiesie ɔsorsor no.” Nna ɔwɔ Jehovah ne nkyɛn dɛ “odwimfopanyin.” (Mbɛ. 8:27-31) Iyi ekyir koraa no, Jesus baa asaase do, na ɔbɛyɛɛ edwuma soronko bi. Jesus kãa dɛ n’edziban nye dɛ ɔbɛyɛ dɛm edwuma a Jehovah dze ahyɛ ne nsa no. Biribiara a ɔyɛe wɔ asaase do no daa no edzi dɛ Nyankopɔn na ɔsomaa no.​—John 4:34; 5:36; 14:10.
4. Ɔdze fa ahomgye ho no, ebɛnadze na yebotum esũa efi Jehovah na Jesus hɔ?
4 Yeehu dɛ Jehovah na Jesus ayɛ edwumadzen ho nhwɛdo ama hɛn. Aso iyi kyerɛ dɛ no ho nnhia dɛ yɛgye hɛn ahom wɔ edwuma ho? Ɔnntse dɛm koraa. Jehovah yɛ obi a ɔmmberɛ, dɛm ntsi onnhia dɛ ɔgye n’ahom ber a ɔayɛ edwuma bi ewie no. Naaso, Bible no kã dɛ ber a Jehovah bɔɔ ɔsor na asaase wiei no, “ɔhomee na ɔdwedwee noho.” (Ex. 31:17) Iyi ma yehu dɛ Jehovah gyaa dɛ ɔrobɔ adze na ɔgyee mber dze hwɛɛ ndzɛmba a ɔayɛ no, na odzii dɛw wɔ ho. Ɔwɔ mu dɛ ber a Jesus baa asaase do no ɔyɛɛ edwumadzen dze, naaso ɔgyee ber gyee n’ahom na ɔnye n’anyɛnkofo too nsa dzidzii.​—Matt. 14:13; Luke 7:34.
5. Ebɛnadze na ɔyɛ dzen ma Nyankopɔn n’asomfo pii dɛ wɔbɛyɛ?
5 Bible no hyɛ Nyankopɔn n’asomfo nkuran dɛ wɔnyɛ nkorɔfo a hɔn enyi gye edwuma ho. Ɔwɔ dɛ n’asomfo dze nsi yɛ edwuma, na onnyi dɛ wɔyɛ akwadwefo. (Mbɛ. 15:19) Bi a eyɛ edwuma dze hwɛ w’ebusua. Afei so, Christ n’esuafo nyina wɔ asodzi dɛ wɔbɛyɛ asɛmpaka edwuma no. Naaso, ohia dɛ egye ber dze gye w’ahom yie. Ɔtɔ da a, aso ɔyɛ dzen ma wo dɛ ibenya mber dze ayɛ edwuma, edze bi akɔ asɛnka, na edze bi so agye w’ahom? Yebesi dɛn ehu mber dodow a ɔwɔ dɛ yɛdze yɛ edwuma nye mber dodow a ɔwɔ dɛ yɛdze gye hɛn ahom?
NYA BER MA EDWUMA, NA NYA BER SO MA AHOMGYE
6. Ebɛn kwan do na Mark 6:30-34 ma yehu dɛ nna Jesus wɔ edwuma na ahomgye ho adwen pa?
6 Ohia dɛ inya ber ma edwuma, na inya ber so ma ahomgye. Sunsum kaa Ɔhen Solomon ma ɔkãa dɛ: ‘Adze biara wɔ n’aber a wɔahyɛ ato hɔ.’ Ɔkãa ber a wɔtsɛw anaa wodua, wosi, wosũ, wɔserew, wɔsaw, nye ndzɛmba afofor ho asɛm. (Ɔsɛnk. 3:1-8) Ɔda edzi pefee dɛ, edwuma na ahomgye yɛ ndzɛmba etsitsir ebien bi a ɔka hɛn asetsena ho. Nna Jesus wɔ edwuma na ahomgye ho adwen pa. Da kor bi, asomafo no kɔr asɛnka a nna adagyer nnyi mu koraa. Wobodurii no, nna nkorɔfo so ridzi hɔn hɔ akɔnaaba ma “wonnya adagyer nndzidzi mpo.” Jesus hun dɛm no, ɔkãa dɛ: “Homankasa hom mbra sar do nkyɛn beebi, na hom mbɔhom kakra.” (Kenkan Mark 6:30-34.) Ɔwɔ mu dɛ ɔnnyɛ ber nyina na Jesus nye n’esuafo no nyaa adagyer gyee hɔn ahom dɛ mbrɛ wɔpɛ dze, naaso nna onyim dɛ hɔn nyina hia ahomgye.
7. Sɛ yehu dza Mbra no kãe faa Ahomgyeda no ho a, ebɛnadze na ɔbɔboa hɛn ma yaayɛ?
7 Ɔtɔ da a, ohia dɛ hɛn nyina gye hɛn ahom anaa yɛyɛ nsesa wɔ ndzɛmba a yɛyɛ no da biara no mu. Dza ɔma yehu dɛ asɛm yi yɛ nokwar nye dɛ, Nyankopɔn yɛɛ nhyehyɛɛ bi maa no nkorɔfo wɔ tsetse mber mu. Ɔno nye dapɛn dapɛn Ahomgyeda ho nhyehyɛɛ no. Ɔwɔ mu dɛ yennyi Moses Mbra no ase dze, naaso sɛ yehu dza Mbra no kãe faa Ahomgyeda no ho a, yebotum enya mfaso efi mu. Iyi botum aboa hɛn ma yeesusu ho ahwɛ dɛ yɛwɔ edwuma na ahomgye ho adwen pa anaa.
NNA AHOMGYEDA NO YƐ BER A WƆDZE SOM NYANKOPƆN NA WƆDZE GYE HƆN AHOM
8. Dɛ mbrɛ Exodus 31:12-15 kyerɛ no, nna Ahomgyeda no yɛ da a wɔdze yɛ dɛn?
8 Bible no kã dɛ Nyankopɔn dze “nda” esia bɔɔ adze. Iyi ekyir no, ogyaa dɛ ɔbɔbɔ ndzɛmba wɔ asaase do. (Gen. 2:2) Naaso, Jehovah yɛ obi a ɔpɛ edwuma, ntsi wɔ akwan bi do no, ‘ɔakɔ do ayɛ edwuma.’ (John 5:17) Jehovah dze “nda” esia yɛɛ edwuma na ɔgyee n’ahom “da” a otsĩa esuon no. Ntsi, ɔkãa kyerɛɛ Israelfo no dɛ da a otsĩa esuon biara no wɔngye hɔn ahom. Nyankopɔn kãa dɛ Ahomgyeda no yɛ asɛnkyerɛdze a ɔda ɔno nye Israelfo no hɔn ntamu. Nna da a ɔtse dɛm no yɛ ‘ahomgye, ɔyɛ adze krɔnkrɔn ma Jehovah.’ (Kenkan Exodus 31:12-15.) Sɛ odu da a ɔtse dɛm a, nna onnyi dɛ obiara yɛ edwuma. Mbofra o, nkowaa o, mbowa o, nna onnyi dɛ hɔn mu biara yɛ edwuma dɛm da no. (Ex. 20: 10) Iyi maa ɔman no nyaa kwan dze hɔn adwen sii Nyankopɔn no som do.
9. Jesus n’aber do no, nna nkorɔfo wɔ adwen a ɔnntsen wɔ Ahomgyeda no ho. Ɔno nye dɛn?
9 Nna Ahomgyeda no ye ma Nyankopɔn no nkorɔfo. Naaso, odur Jesus n’aber do no, nna nyamesom akandzifo no ahyehyɛ mbra pii afa Ahomgyeda no ho ma ne dzi ayɛ dzen ama nkorɔfo. Sɛ obi pempan eburow mbɛtsem anaa wɔsa obi yarba Ahomgyeda a, nna nyamesom akandzifo yi kã dɛ ɔyɛ bɔn. (Mark 2:23-27; 3:2-5) Nna iyi nnyɛ dza Nyankopɔn pɛ. Jesus maa hɔn a nna wɔpɛ dɛ wotsie no no hun dɛm nokwasɛm yi.
Sɛ odu Ahomgyeda a, nna Jesus n’ebusua dze hɔn adwen si ɔsom a wɔdze bɛma Nyankopɔn no do (Hwɛ nkyekyɛmu 10) *
10. Ebɛn kwan do na Matthew 12:9-12 ma yehu adwen a nna Jesus wɔ wɔ Ahomgyeda no ho?
10 Jesus nye n’ekyirdzifo a wɔyɛ Jewfo no dzii Ahomgyeda, osiandɛ nna wɔhyɛ Moses Mbra no ase. * Naaso, Jesus dze ne nsɛm a ɔkãe nye ne ndzeyɛɛ kyerɛɛ dɛ ɔnnyɛ mfom dɛ obi befi ayamuyie mu ayɛ adze aboa afofor wɔ Ahomgyeda. Ɔkãe ma no mu daa hɔ dɛ: “Ɔfa mbra mu dɛ wɔyɛ yie ahomgyeda.” (Kenkan Matthew 12:9-12.) Oemmbu ayamuyie mu a obi befi ayɛ adze aboa afofor dɛ otsia Ahomgyeda no. Ndzɛmba a Jesus yɛe no ma yehu dɛ nna ɔtse siantsir paara ntsi a Nyankopɔn kãa kyerɛɛ no nkorɔfo dɛ wɔngye hɔn ahom wɔ Ahomgyeda no ase. Osiandɛ Nyankopɔn no nkorɔfo gyee hɔn ahom wɔ hɔn ndwuma ho ntsi, wotumii dze hɔn adwen sii Nyankopɔn no som do. Ɔda edzi dɛ ebusua a wɔtsetsee Jesus wɔ mu no, nna wɔdze Ahomgyeda no som Nyankopɔn. Siantsir a yetum kã dɛm nye dɛ, aber a nna Jesus wɔ no kurow mu Nazareth no, kyerɛwnsɛm no kãe faa no ho dɛ: “Dɛ mbrɛ [Jesus] ɔtɔ dɛ ɔyɛ no, ɔkɔr nhyiamudan no mu ahomgyeda no, na ɔsoɛree gyinaa dɛ ɔrebɛkenkan.”​—Luke 4:15-19.
EBƐN SUBAN NA EDA NO EDZI WƆ EDWUMA HO?
11. Ɔdze fa edwumadzen ho no, woana na ɔyɛɛ ho nhwɛdo pa maa Jesus?
11 Joseph na ɔtsetsee Jesus, ntsi ɔda edzi pefee dɛ, aber a nna ɔrekyerɛ Jesus duadwimfo edwuma no, ɔsaan so kyerɛɛ no Nyankopɔn adwen wɔ edwuma ho. (Matt. 13:55, 56) Ɔda edzi dɛ nna Jesus hu edwumadzen a n’egya Joseph yɛ da biara dze hwɛ n’ebusua a no mufo dɔɔ sõ no. Mber bi ekyir no, Jesus kãa kyerɛɛ n’esuafo no dɛ: “Odwumayɛfo n’apaadze sɛ no.” (Luke 10:7) Nokwasɛm nye dɛ nna Jesus nyim mbrɛ wosi yɛ edwumadzen.
12. Ebɛn kyerɛwnsɛm ahorow na ɔma yehu dza Bible no kã fa edwumadzen ho?
12 Nna ɔsomafo Paul so nyim mbrɛ wosi yɛ edwumadzen. Nna n’edwuma tsitsir nye dɛ obedzi Jesus ne dzin nye n’asɛm ho dase. Naaso, Paul saan so yɛɛ honam afamu edwuma dze hwɛɛ noho. Nna Thessalonicafo no nyim no ‘mbɔdzembɔ nye ne berɛ.’ Afei so, nna wonyim edwumadzen a ɔyɛe ‘adzekyee nye adzesaa, amma ɔaannyɛ adzesoa amma obiara.’ (2 Thess. 3:8; Andw. 20:34, 35) Aber a Paul kãa dɛm asɛm yi no, ɔbɛyɛ dɛ nna ntamadan ho edwuma a ɔyɛ no ho asɛm na ɔrekã. Ɔwɔ Corinth no, ɔtsenaa Aquila na Priscilla hɔn nkyɛn na ‘ɔnye hɔn yɛɛ edwuma, nna hɔn edwuma nye dɛ wɔyɛ ntamadanyɛfo.’ Ber a Paul kãa dɛ ɔyɛɛ edwuma “adzekyee nye adzesaa” no, nna nnyɛ dza ɔrekyerɛ nye dɛ ɔyɛɛ edwuma araa ma ɔanngye n’ahom da. Nda bi wɔ hɔ a, nna ɔnnyɛ edwuma; ibi nye Ahomgyeda. Nna Jewfo no so nnyɛ edwuma Ahomgyeda. Ntsi, nna Paul dze ho kwan no dzi hɔn dase.​—Andw. 13:14-16, 42-44; 16:13; 18:1-4.
13. Ebɛnadze na yebotum esũa efi Paul no nhwɛdo no mu?
13 Ɔsomafo Paul yɛɛ nhwɛdo pa. Nna ɔwɔ dɛ ɔyɛ honam afamu edwuma. Naaso ɔhwɛɛ so hun dɛ ɔbɛkã “Nyankopɔn asɛmpa” no daa; ɔno na ɔyɛ edwuma krɔnkrɔn. (Rom. 15:16; 2 Cor. 11:23) Ɔhyɛɛ afofor nkuran dɛ, hɔn so wɔnkã asɛm no daa. Dɛm ntsi, Aquila na Priscilla bɛyɛɛ Paul “n’asɛfo dwumadzifo wɔ Christ Jesus mu.” (Rom. 12:11; 16:3) Paul hyɛɛ Corinth asafo no nkuran dɛ wɔnyɛ pii wɔ “Ewuradze edwuma mu.” (1 Cor. 15:58; 2 Cor. 9:8) Jehovah mpo dze no sunsum kaa Paul ma ɔkãa dɛ: “Sɛ obi mmpɛ dɛ ɔyɛ edwuma a, na eso mma onndzidzi.”​—2 Thess. 3:10.
14. Asɛm a Jesus kãe wɔ John 14:12 no kyerɛ dɛn?
14 Edwuma a ohia papaapa a ɔwɔ dɛ yɛyɛ wɔ ewiei ber yi mu nye dɛ yɛbɛkã asɛm no na yaayɛ nkorɔfo Jesus n’esuafo. Jesus kãe too hɔ dɛ n’esuafo bɛyɛ ndwuma akɛse akyɛn dza ɔyɛe no! (Kenkan John 14:12.) Nna nnyɛ dza Jesus repɛ akyerɛ nye dɛ yɛbɛyɛ anwanwadze dɛ mbrɛ ɔyɛe no. Mbom, nna ɔrepɛ akyerɛ dɛ yɛbɛyɛ asɛnka edwuma no akyɛr asen no. Afei so, yɛbɛkã asɛmpa no wɔ mbea pii na yaakã akyerɛ nyimpa pii akyɛn dza ɔyɛe no.
15. Ebɛn nsɛm na ɔwɔ dɛ yebisa hɛnho, na ebɛnadze ntsi a?
15 Sɛ eyɛ honam afamu edwuma a, ɔnodze bisa woho dɛ: ‘Aso wonyim me wɔ edwuma mu dɛ obi a ɔyɛ edwumadzen? Ana muwie m’edwuma wɔ ber ano, na meyɛ dza mubotum nyina?’ Sɛ ibua dɛ nyew a, nna ɔkyerɛ dɛ w’edwumawura botum enya wo mu ahotodo. Afei so, bi a w’edwumamufo a wohu mbɔdzen a ebɔ no benya ɔpɛ dɛ wobetsie Ahendzi no ho asɛm no. Ɔba no asɛmpaka na ɔkyerɛkyerɛ edwuma no a, ibotum ebisa woho dɛ: ‘Aso wonyim me dɛ meyer moho yɛ asɛnka edwuma no? Ana misiesie moho yie yɛ nserahwɛ a odzi kan? Sɛ nkorɔfo kyerɛ asɛm no ho enyigye a, ana meyɛ ntsɛm san kɛsera hɔn? Aso medze moho hyɛ asɛnka edwuma no n’afã ahorow nyina mu daa?’ Sɛ ibua dɛ nyew a, w’enyi bɛgye wɔ asɛnka edwuma no mu.
EBƐN ADWEN NA EWƆ WƆ AHOMGYE HO?
16. Sɛ edze adwen a nna Jesus nye n’asomafo no wɔ wɔ ahomgye ho no toto adwen a nyimpa pii a wɔwɔ hɔ ndɛ no wɔ no ho a, ebɛn nsonsonee na ɔwɔ mu?
16 Nna Jesus nyim dɛ ɔtɔ da a, ohia dɛ ɔnye n’asomafo no gye hɔn ahom. Naaso, nyimpa a nna wɔwɔ hɔ dɛm aber no nye nyimpa a wɔwɔ hɔ ndɛ no, hɔn mu pii yɛ hɔn adze tse dɛ ɔdzefo a Jesus kãa noho asɛm wɔ ne mfatoho mu no. Dɛm ɔbarimba no kãa kyerɛɛ noho dɛ: “Gye w’ahom, nom, na ma woho ntɔ wo.” (Luke 12:19; 2 Tim. 3:4) Nna ɔbarimba yi susu dɛ adze a ohia tsitsir wɔ asetsena mu nye enyigyedze na ahomgye. Naaso, Jesus nye n’asomafo no annyɛ hɔn adze dɛm; wɔamma hɔn enyi a wɔbɛgye annyɛ adze a ohia tsitsir wɔ hɔn asetsena mu.
Sɛ yenya edwuma na ahomgye ho adwen pa a, yebenya kwan dze hɛn adwen esi ndwuma pa a yɛbɛyɛ a ɔbɛma yenya enyigye no do (Hwɛ nkyekyɛmu 17) *
17. Ber a yɛmmfa nnkɔ edwuma no, yɛdze dzi dwuma dɛn?
17 Ndɛ, yɛbɔ mbɔdzen dɛ yebosũasua Jesus. Ber a yɛmmfa nnkɔ edwuma no, yɛdze bi gye hɛn ahom, na yɛdze bi so yɛ ndzepa tse dɛ asɛnka edwuma nye Christianfo nhyiamu a yɛkɔ. Nokwasɛm mpo nye dɛ, yebu esuafoyɛ edwuma no nye asafo nhyiamu a yɛkɔ no dɛ ohia papaapa ma ntsi, yɛyɛ dza yebotum nyina dze hɛnho hyɛ ndzɛmba krɔnkrɔn a ɔtse dɛm mu daa. (Heb. 10:24, 25) Sɛ yetu kwan kɔ beebi kɛgye hɛn ahom mpo a, yɛkɔ asafo nhyiamu ɔmmfa ho beebi a yɛwɔ no, na hɔn a yehyia hɔn no so, yɛhwehwɛ ho kwan no nye hɔn bɔ Bible mu nkɔmbɔ.​—2 Tim. 4:2.
18. Ebɛnadze na hɛn Hen, Christ Jesus, pɛ dɛ yɛyɛ?
18 Ɔyɛ hɛn enyigye papaapa dɛ hɛn Hen, Christ Jesus, nnhwehwɛ dza ɔbor hɛn ahoɔdzen do, na mbom ɔboa hɛn ma yenya edwuma na ahomgye ho adwen pa! (Heb. 4:15) Ɔpɛ dɛ yɛgye hɛn ahom dɛ mbrɛ ɔsɛ. Nkyii so, ɔpɛ dɛ yɛyɛ edwumadzen dze hwɛ hɛnho na yɛdze hɛnho hyɛ esuafoyɛ edwuma a ɔyɛ enyigye no mu. Adzesua a odzi hɔ mu no, yɛbɔhwɛ dza Jehovah ama Jesus ayɛ mbrɛ ɔbɛyɛ a ɔbɛgye hɛn efi nkowaasom a ɔyɛ yaw mu.
Sɛ yɛhwɛ nhwɛdo a Jehovah na Jesus ayɛ wɔ edwuma ho no a, ebɛnadze na yebotum esũa efi mu?
Ebɛnadze na Ahomgyeda no maa Israelfo no tumii yɛe, na ebɛnadze na iyi kyerɛ ma hɛn?
Ebɛnadze ntsi na ɔwɔ dɛ yenya edwuma na ahomgye ho adwen pa?
NDWOM 38 Ɔbɛma Ayɛ Dzen
^ nky. 5 Kyerɛwnsɛm no ma yehu mbrɛ yebesi enya edwuma nye ahomgye ho adwen pa. Iyi ho nhwɛdo nye dapɛn dapɛn Ahomgyeda ho nhyehyɛɛ a Jehovah dze maa Israelfo no. Ntsi, yebosusu dɛm nhyehyɛɛ yi ho wɔ adzesua yi mu, ama yeehu mbrɛ yebesi enya edwuma nye ahomgye ho adwen pa.
^ nky. 10 Nna esuafo no wɔ obu kɛse paara ma Ahomgyeda no. Ntsi ber a Jesus wui no, wogyaa ahoboa a nna wɔreyɛ a wɔdze besie no no kesii dɛ Ahomgyeda no baa ewiei.​—Luke 23:55, 56.
^ nky. 55 MFONYIN NO HO NKYERƐKYERƐMU: Joseph nye n’ebusua rokɔ nhyiamudan mu wɔ Ahomgyeda.
^ nky. 57 MFONYIN NO HO NKYERƐKYERƐMU: Egya bi yɛ edwuma dze hwɛ n’ebusua. Ber a ɔammfa annkɔ edwuma no, ɔwɔ mu dɛ ɔnye n’ebusua etu kwan dɛ wɔrekɛgye hɔn ahom dze, naaso ɔdze noho ahyɛ ɔsom edwuma n’afã ahorow mu.
Fa mona Fa mona Edwuma Wɔ N’aber, Na Ahomgye So Wɔ N’aber